Lesi sithelo esiyisimangaliso sivimba ukukhula kwamaseli womdlavuza kanye nesifo sikashukela - i-Afrikhepri Fondation
Izithelo eziyisimangaliso zivimbela ukukhula kwamangqamuzana omdlavuza nesifo sikashukela
I-Goya noma enye eyaziwa ngokuthi uKarela, iyisithelo esibabayo se-melon esetshenziselwa izinzuzo zezempilo emazweni wonke emhlabeni isikhathi eside. Ikhula kahle ezindaweni ezishisayo, ezinomswakama futhi zitholakala ikakhulukazi eSouth America nase-Asia. Ungumuthi ojwayelekile wendabuko eChina, eNdiya, e-Asia nakwezinye izingxenye zaseningizimu-mpumalanga ye-USA.
Le melon enempilo inokunambitheka okumunyu kakhulu, futhi ukwakheka kwayo kufana nekhukhamba elinamaqhubu. Kodwa-ke, izingxenye zemvelo ezikuyo zitholakele ukuthi zikwazi ukwelapha iziguli ezinomdlavuza we-pancreatic.
Ngokusho kukaDokotela uFrank Shallenberger MD, obhekisisa ekwelashweni nokwelashwa kokuguga e-Nevada Alternative Center kanye nemithi elwa nokuguga, lesi sithelo singavimba ukukhula komdlavuza ngoba sibulala amaseli womdlavuza, ngaleyo ndlela sivimbele ukukhula kwabo.
UDkt Shallenberger uhlala eluleka iziguli zakhe ukuthi zethembe imvelo futhi zisebenzise imikhiqizo yemvelo nezinto zokwelapha kunoma yiluphi uhlobo lwesifo. Uthi lesi sithelo esiyisimangaliso sivimba ukukhula kwamaseli womdlavuza ngempumelelo.
Ngokufanayo, ngokusho kwakhe okwakamuva, isisombululo se-5% se-melon juice singamelana nomdlavuza we-pancreatic.
Lesi sithelo sichitha imigqa yamaseli omdlavuza engamaphesenti angama-90 no-98. Umphumela wayo ubuyekezwe eNyuvesi yaseColorado, futhi imiphumela yakhombisa ukwehliswa okungu-64% ngosayizi wama-pancreatic tumors.
Ngakho-ke, lolu cwaningo luqinisekisa kuphela izinzuzo nezenzo ezinamandla ze-melon ebabayo. Ngaphezu kwalokho, futhi idlala indima enkulu ekwelashweni kokutheleleka kwesikhumba, izimpawu zesifo sikashukela, i-asthma, izinkinga zesisu kanye nomfutho wegazi ophakeme.
Lezi izinzuzo ezibaluleke kakhulu zezempilo ze-melon ebabayo
Ihlanza bese ixosha isibindi, ikhulula ubuhlungu be-gout futhi igqugquzela ukujikeleza kwegazi.
Ukwandisa ukuqina kwesimiso sakho somzimba nokuzivikela komzimba wakho ngokumelene nezifo.
Ivuselela i-peristalsis yokudla kanye nokugaya izinsiza kuze kube yilapho ukudla sekuqediwe ngaphakathi kwamathumbu nakuhlelo.
I-Bitter melon inothile nge-P-polypeptide, i-phytonutrient esehlisa ushukela wegazi. I-Bitter melon futhi iqukethe i-charantin ekhethekile, eyaziwa ngokwandisa ukwakheka kwe-glycogen kanye nokufakwa kweglucose kwezicubu zesibindi, izicubu zomzimba nezicubu ze-adipose. Bobabili ushukela wegazi ophansi, obalulekile ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Iyakhulula i-hangovers ngoba iyasheshisa imetabolism, futhi ngasikhathi sinye futhi ihlwaye isibindi ngemuva kokuphuza utshwala.
Ukusetshenziswa njalo kwesiphuzo sayo kusiza ukudambisa izifo zokukhunta ze-psoriasis kanye nezifo zokukhunta zomsubathi.
Kuthuthukisa ukubona kwamehlo futhi idambise inkinga yokubuka ngoba icebile nge-beta carotene
Kungumthombo we-folate okunciphisa ukubonakala kwesiphako se-neural tube ezinganeni ezisanda kuzalwa.
LUma kudliwa njalo, kukhulisa ukukhuthazela kwakho kanye namandla akho.
Indlela yokuqalwa 3
Ama-aw noma ubuciko bokuyenga i-Afrika
I-Promosol, i-oveni yelanga "eyenziwe ku" Chad